Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo war ka soo saartay jahwareerka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed | Radio Hormuud
Wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo war ka soo saartay jahwareerka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed
Muqdisho (RH)-Dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegtay in aan la aqbali doonin in ay dib u dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, oo ku taariiqaysan in la qabto 17-ka bishan November.
War-qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha, federaalka iyo dib u Heshiisiinta iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, ayaa lagu sheegay in waqtiga loo ballamay doorashada Koonfur Galbeed oo ku began 17-ka bishan Nofeembar aan laga dabamarin doorashada.
Sidoo kale, dowladda waxa ay fartay musharrixiinta in ay ku tixgaliyaan guddiga doorashada waqtiga ay iclaamiyeen isla markaana la joojiyo jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Baydhabo.
Warka qoraalka ah ee kasoo baxay wasaarada arimaha gudaha federaalka ayaa u qornaa sidan:-
Hadalka dowladda ayaa yimid kaddib markii xaley 15 xubnood oo ka mid ah 27-ka xubnood ee guddiga doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed ay iscasileen isla markaana aan la buuxin weli boosaaska ay banneeyeen.
Xubnaha iscasilay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada iyo xoghayaha guddiga doorashada.